Motivation for success :: एलआईसी नेपालमा बीमा गर्नुभएको छ ? कम्पनीको झण्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ फस्यो, तनावमा सिइओ
एलआईसी नेपालमा बीमा गर्नुभएको छ ? कम्पनीको झण्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ फस्यो, तनावमा सिइओ
काठमाडौं – भारतीय बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड (एलआईसी)मा बीमा गरेका बीमित हुरुका लागि दुःखद खवर छ । कम्पनीको ५ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख ७२ हजार ८९० रुपैयाँ अभिकर्तालाई दिएको कर्जा फसेको छ ।
कम्पनीले नियामक निकाय बीमा समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै अभिकर्तालाई कर्जा दिएको थियो । उक्त कर्जा गएको असार मसान्तसम्म उठाइसक्नु पर्ने थियो । तर अहिलेसम्म उक्त रकम असुल भएको छैन् । समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कम्पनीले अभिकर्तालाई अर्ब बढी कर्जा दिएको थियो ।
बीमा समितिले कम्पनीहरुले दिने अभिकर्ता कर्जालाई गैर कानुनी ठहर गरिसकेपछि पनि कर्जा प्रबाह गरेपछि समस्या आएको छ । समितिले २०७७ वैशाख २ गते नै परिपत्र जारी गर्दै अभिकर्तालाई कर्जा दिन रोक लगाएको थियो ।
समितिले अभिकर्तालाई ‘कर्जा दिदैँ नदेउ र दिएको कर्जा समेत असुल गर’ भनेर २०७७ वैशाखमै निर्देशन दिएको हो तर, कम्पनीले भने २०७७ पुस २८ गतेसम्म अभिकर्तालाई कर्जा दिएको बीमा समितिबाट प्राप्त विवरणमा देखिन्छ ।
यतिमात्र नभएर कम्पनीले एकै जना अभिकर्तालाई पटक–पटक गरी अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा दिएको छ । कम्पनीका अभिकर्ता अन्जन भण्डारीले २०७७ फागुन मसान्तसम्म कुल १ अर्ब २३ करोड ५० लाख ५६ हजार ७९९ रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।
उनीमात्र होइन् माथिल्लो तहका अभिकर्ताहरुले झण्डा आधा भन्दा बढि रकम लिएका छन् । यो तथ्यांक समितिले उपलब्ध गराएको कम्पनीले फागुन मसान्तसम्म ‘टप २५’ ऋणी अभिकर्ताको सूचीअनुसार हो । उक्त विवरणमा कम्पनीको कुल ऋणी अभिकर्तामा समेत भण्डारीकै बाहुल्यता भएको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
समितिको निर्देशनपछि कम्पनीले २०७७ असार ३० र ३१ गते, साउन ५ गते, पुस १६ र २८ गते अभिकर्तालाई कर्जा दिएको छ । जसमा २०७७ असार ३० गते कम्पनीले अभिकर्ताहरु भरत दाहाललाई २ करोड ९ लाख ४६४ रुपैयाँ र पुस १६ गते १ करोड ८५ लाख ६९ हजार ६४ रुपैयाँ बिना धितो अग्रिम कमिसनस्वरुप बिना धितो कर्जा दिएको छ ।
समितिबाट कम्पनीले अभिकर्तालाई दिएको कर्जाको विवरण माग गरेको थियो । प्राप्त विवरण अनुसार गत असार मसान्तसम्म कम्पनीले ३ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ६५४ रुपैयाँ अभिकर्तालाई बिना धितो कर्जा दिएको छ ।
यद्यपि २०७७ फागुन मसान्तसम्म कम्पनीले ५ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख ७२ हजार ८९० रुपैयाँ अभिकर्तालाई कर्जा दिएको थियो । कम्पनीले २०७७ फागुन मसान्तसम्म कुल ५ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख ७२ हजार ८९० रुपैयाँ कर्जा अभिकर्तालाई दिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्जा लिने ‘टप २५’ ऋणी अभिकर्ता भने ३ जना मात्र छन् ।
सिन्धुपाल्चोक बलेखेका भण्डारीलाई यति ठूलो रकम कर्जाका रुपमा किन दिइयो ? गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सामान्यतया कम्पनीले अभिकर्ताले घर वा गाडि खरिद गर्न चाहेमा कर्जा प्रबाह गर्ने गरेको नजिर छ ।
तर १ अर्ब २३ करोड ५० लाख ५६ हजार ७९९ रुपैयाँ भण्डारीले के का लागि लिए र यसमा को कसको संलग्नता छ ? यसको पर्दाफाँस हुदै जानेछ ।